lulu: မြန်မာအစားအစာ ဘူဖေးလ်ဧည့်ခံလိုသူ မောင်နှမများအတွက့့့် 
at 5:59 PM Labels: အထွေထွေ
ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့မှာတော့ စီဘောက်စ်ထဲမှာ မguiness လာမေးထားတဲ့ "မြန်မာအစားအစာတွေ ဘူဖေးလ်ကျွေးချင်လို့ပါနော် ၁၁. ၇ အမှီပေါ့" ဆိုတော့ အမြန်ဆုံး စဉ်းစားပေးပြီး မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
ဘယ်နိုင်ငံမှာနေတာလဲ၊ ဘယ်လူမျိုးနဲ့ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ကို ကျွေးချင်တာလဲ ဆိုတာရယ်၊ ချက်ပြုတ်မယ့် လူအင်အား ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတွေရယ်ကို မသိလိုက်လို့ ၀ိုင်းတော်သား ကိုတုတ်ကြီးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားစီစဉ်ပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။
ဘူဖေးကျွေးတဲ့အခါ အဆင်ပြေရအောင်လို့ Appetizer, Main Course နဲ့ Dessert ဆိုပြီး အဓိက သုံးမျိုး ခွဲပြီး လုပ်ပေးထားပါမယ်နော်။
စစချင်း Appetizer အတွက် အသုပ်လေးတွေနဲ့ စရင်ကောင်းမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်နော်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသုပ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ မြင်းခွာရွက်သုပ်၊ ဂေါ်ဖီသုပ်၊ ကျောက်ပွင့်သုပ်၊ မန်ကျည်းရွက်နုသုပ်၊ ပဲကြာဆံသုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ် စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ၊ ၀ယ်လို့ရမယ့်ပစ္စည်း ပေါ် မူတည်ပြီး အဆင်ပြေမယ့်အသုပ်ကို အနည်းဆုံး (၃) မျိုးလောက် ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။
ဒါ့အပြင် ဗယာကြော်၊ ကြက်သွန်ကြော်၊ ကော်ပြန့်ကြော်၊ ဆမူဆာကြော် စသဖြင့်ပေါ့လေ၊ အရွယ်လေးတွေကိုတော့ တစ်ခါဝါးစားရင် အနေတော်ရှိမည့် အရွယ်လေး တွေပေါ့၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း အာလူးကတ်သလိတ်လိုမျိုးပေ့ါနော်။ အဲ့ဒါလေးတွေကို အချဉ်ရည် ကောင်းကောင်းလေးဖျော် ပြီး ဆလတ်ရွက်လေးတွေနဲ့ ထည့်ပေးလို့ရသေးတယ်နော်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက်၊ ဂွေးသီးငါးပိချက်၊ ငါးပိစိမ်းစားသုပ် စတာတွေကို သခွားသီး၊ ခရမ်းကြွပ်သီး၊ ဆတ်လတ်ရွက်၊ ရုံးပတီသီးရေနွေးဖျော၊ မျှစ်နုလေး၊ သရက်သီးစိမ်း စတဲ့အသီးအရွက်တွေနဲ့လည်း တည်ခင်းပေးလို့ရပါတယ်နော်။
အထူးအဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင် မြန်မာအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ နန်းကြီးသုပ်လို၊ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲသုပ်လိုမျိုးကို အရသာရှိရှိ သုပ်ထားပြီး တစ်ပွဲလောက် ချထားပေးလို့ ရပါတယ်နော်။
Main Course အတွက်ကတော့ ကြက်သား၊ ၀က်သား၊ ဆိတ်သား၊ ငါး၊ ပုစွန်၊ ပြည်ကြီးငါး စတာတွေကို ချက်ပြီး ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ ၀က်သားသုံးထပ်သားကို နာနတ်သီးလေးနဲ့ အအီပြေအောင်ချက်၊ ဒါမှမဟုတ် ၀က်သားအသားကို အချိုချက်လေး နူးအိအိလေးချက်၊ ဒါမှမဟုတ် ၀က်ကလီစာလေးတွေကို စတူးလေးလုပ်၊ တစ်ခြားတစ်ခု ကတော့ ၀က်နံရိုးကို နူးအိနေအောင်ချက်ပြီးတော့မှ ကြံမဆိုင်လေးအုပ် ရေကျန်ဆီကျန် လေးချက်၊ အဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် လေး ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ၀က်သားပုန်းရည်ကြီးလေးချက် လိုက်ဦးနော်။
ကြက်သားကိုတော့ အာလူးလေးနဲ့ ရိုးရိုးချက်တာမျိုးလည်း ထည့်လို့ရသလို ကြက်သား အုန်းနို့နဲ့ ပင်စိမ်းလေးအုပ်ပြီး ချက်တာလည်း ချက်လို့ရပါတယ်နော်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း ကြက်သားကို မာဆလာလေးအုပ်ပြီးချက်ပါနော်။
ငါးကိုတော့ ငါးနဲ့ ရှီတာကေးမှိုနဲ့ အချိုချက်လေးပေါ့၊ အဲ့ဒါမျိုးလေး ချက်ကြည့်ပါ ဦးနော်။ ငါးကြီးသားကို အလယ်ရိုးနဲ့ ဘေးဆူးတောင်တွေ မပါအောင် ကိုင်ပြီးတော့မှ အသားတုံးလေးတွေချည်း လှီးယူပါနော်။ ပြီးတော့ ချင်းရည်တွေနဲ့ နယ်ပြီး ဆား၊ သကြားတို့နဲ့အတူရောနယ်ပြီး ၁ နာရီလောက် နှပ်ထားပါနော်။ ပြီးတော့ ကြက်သွန်ဖြူ ဓားပြားရိုက်ရယ် ကြက်သွန်နီ လေးစိပ်ထိုးကို နှမ်းဆီမွှေးလေးနဲ့ ဆီသတ်ပြီး ငါးတွေထည့်ပြီး အသာအယာလေး မွှေပေးပါနော်။ ပြီးရင် ရေစိမ်ထားတဲ့ ရှီတာကေးမှိုလေးတွေကို ထည့်ပြီး တည်ပေးပါနော်။ ရေခမ်းလောက်ရင် ရေကို ငါးနဲ့ မှိုမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ထပ်တည်ပေးပြီးတော့ အရသာ အပေါ့အငံမြည်းပြီး ချလိုက်ပါနော်။ ဟင်းပွဲပြင်တဲ့အခါမှာတော့ ကြက်သွန်မြိတ်လေး ဖြစ်ဖြစ်၊ ပင်စိမ်းရွက်လေးဖြစ်ဖြစ် အုပ်ပြီး ချပေးပါနော်။ တကယ်လို့ ချိုချဉ်အရသာလေး ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ငရုတ်သီးစိမ်းရယ်၊ ရှာလကာရည်လေးရယ်ထည့်ပေးပါနော်။ အဲ့ဒါဆိုရင် ငါးက ညှီလည်းမညှီဘဲ အရသာလေးတစ်မျိုးနဲ့ စားလို့ကောင်းပါတယ်နော်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ငါးဖယ်ကို ဆီလေးထဲ အပေါ်ယံတင်းရုံ ကြော်ပြီးတော့ အုန်းနို့လေးနဲ့ ချက်တာမျိုးလည်း ကောင်းပါတယ် နော်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ငါးခူရဲယိုရွက်၊ ငါးရံ့အူဟင်း၊ ငါးဥဟင်း၊ ငါးကြော်နှပ် စတာတွေလည်း ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။
ဆိတ်သား၊ အမဲသားတို့ကိုတော့ အတုံးခပ်လတ်လတ်တုံးပြီးတော့ နူးနူးအိအိလေး နှပ်တာမျိုး ချက်လို့ရသလို ငရုတ်သီးအရောင်လှလှလေးနဲ့ချက်၊ ကြက်သွန်နီအကွင်းလိုက် လေးရယ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေရယ်၊ ငရုတ်ပွကြီးတွေနဲ့ထည့်၊ ပူစီနံလေးတွေ အုပ်ပြီး ခပတ်လို ချက်ရင်လည်း ကောင်းပါတယ်နော်။
တချို့ကလေ အသားတွေ မစားဘဲ ပင်လယ်စာပဲ စားတတ်တဲ့သူတွေ ပါတတ်တော့ ငါးတို့ ပုစွန်တို့ ပြည်ကြီးငါးတို့ကို ထည့်ပေးရပါမယ်နော်။ ပုစွန်တို့ ပြည်ကြီးငါးတို့ကို ဟင်း အဖြစ်ချက်လိုက်တာထက် အသုပ်လေးတွေ သုပ်ပေးလိုက်ရင် ပိုပြီး အရသာရှိစေပြီး ဟင်းပွဲကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဖြစ်စေပါတယ်နော်။ ပုစွန်အစိမ်းသုပ်တို့၊ ငါးအစိမ်းသုပ်တို့လည်း ထည့်လို့ရပါ တယ်နော်။
အသီးအရွက်အတွက်ကတော့ ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ မှိုကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ အစိမ်းကြော်၊ အာလူးအချိုချက်၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်ကြော်၊ ရွှေဖယုံသီးနှပ်၊ ရုံးပတီသီးနှပ်၊ ခရမ်းသီးနှပ်၊ ပဲသီးတောင့်ကြော်၊ ခ၀ဲသီးကြော်၊ ဗုံလုံသီးနှပ်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော် စသဖြင်ပေါ့နော်။
ပြီးတော့ မြန်မာအစားအစာတွေထဲ မပါမဖြစ် ဘာလချောင်ကြော်၊ ငံပြာရည်ကြော်၊ ငါးနီတူခြောက်ကြော်၊ ငါးခြောက်ထောင်းကြော်စတာလေးတွေလည်း ထည့်ပေးပါဦးနော်။
အရည်သောက်အတွက်ကတော့ သီးစုံပဲကုလားဟင်း၊ ပဲနီလေးကြာဆံဟင်းရည် စတာတွေအပြင် စွန်ထန်ဟင်းရည်၊ ကြံမဆိုင်ဟင်းရည်၊ တုံယမ်းဟင်းရည်၊ ၀က်နံရိုး ကျောက်ဖရုံသီးဟင်းရည်၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းရည် စတာတွေကိုလည်း ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။
အချိုပွဲအတွက်ကတော့ ရာသီပေါ် အသီးအနှံတွေ အနည်းဆုံး (၃) မျိုးကနေ (၅) မျိုးထိ ပါမယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာဆန်ဆန် ဆိုရင် ကန်စွန်းဥနဲ့သာကူကျိုလေး၊ ကျောက်ကျော လေး၊ ဆနွင်းမကင်းလေး၊ ကောက်ညှင်းကင်၊ မုန့်လင်မယား၊ ဘိန်းမုန့်၊ ရွှေရင်အေး၊ မုန့်လက်ဆောင်း အစရှိတာတွေ ထည့်ပေးလိုက်နိုင်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်နော်။
လက်ဘက်ရည်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဧည့်ခံချင်ရင် လက်ဘက်ခြောက် အချိုခြောက် နှပ်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါဦးနော်။ လက်ဘက်ခြောက် အချိုခြောက် မရှိခဲ့ရင် Lipton tea အထုပ် ၂၀ ကို နှပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့။ အဲ့ဒါဆိုရင် လက်ဘက်ရည် ခွက် (၂၀) လောက် ထွက်မယ်နော်။ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူအောင် အရင်တည်ထားပါနော်။ ပြီးရင် အ၀တ်နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ ရေစစ်ထဲကို Lipton Tea ထုပ်လေးတွေ ထည့်ပေးပါ၊ ပြီးတော့ ထောပတ် (ဂီး) လက်ဘက်စားဇွန်း ၃ ဇွန်းထည့်ပါ၊ ဆား လက်ဘက်စားဇွန်း (၁) ဇွန်းထည့်ပါ။ ပြီးတော့မှ ရေနွေးအိုးထဲကို ရေစစ်လေးထည့်၊ အဖုံးပိတ်ပြီး (၁၅) မိနစ်၊ မိနစ် (၂၅) လောက် နှပ်ပေးပါ နော်။ ပြီးတော့ ရလာတဲ့ လက်ဘက်ခြောက်နှပ်ရည်နဲ့မှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရသာအတိုင်း ရအောင် နွားနို့၊ သကြား၊ နို့ဆီ စတာတွေထည့်ပြီး ဖျော်ပါနော်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ မြန်မာအလွမ်းပြေ လက်ဘက်ရည်ကောင်းကောင်းလေး ရနိုင်ပါ တယ်နော်။
ရေသန့်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကောက်ညှင်းမွှေးလက်ဘက်ခြောက်ခပ်ထားတဲ့ ရေနွေးလေးနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒါလေးတော့ထည့်ပေးပါဦး နော်။ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ မြည်းဖို့ကတော့ အမဲခြောက်၊ ဆတ်သားခြောက်ဖုတ်၊ ငါးခြောက်ဖုတ်၊ မြေပဲယို၊ နှမ်းယို၊ အာဒါလွတ်ပြုတ် ဆီဆမ်း၊ ပဲမြစ်ပြုတ်ဆီဆမ်း၊ ထန်းမြစ်ပြုတ်ဆီဆမ်း၊ ပြောင်းဖူးပြုတ်သုပ် စတာတွေပေါ့နော်။
အဲ့့့  နောက်ဆုံးပိတ်တော့ မေ့မလို့ လက်ဘက်နှပ်လေးလည်း ထည့်ပေးပါဦးနော်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဘူဖေးလ်ကျွေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ တခြားမောင်နှမတွေလည်း အကြံကောင်းများရှိတယ်ဆိုရင် ထပ်ဖြည့်ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ မguiness လည်း နောက်သိချင်တာများ ရှိခဲ့ရင် မေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
ဓာတ်ပုံကို ဂူဂဲလ်ကနေ ရှာထည့်ထားတာပါနော်။
subuueain July 5, 2010 at 8:13 PM
မမလုရေ ငါးအစိမ်းသုတ်ဆို ဘယ်လိုသုတ်ရမလဲဟင်
Shinlay July 5, 2010 at 9:18 PM
နောက်တခါ အခွင့်ကြုံရင် အသုံးဝင်မှာသေချာပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
:P July 6, 2010 at 6:22 PM
တံတွေးတနင်နင်နဲ့ အစ အဆုံးဖတ်သွားတယ်.. စားချင်တာ.. အားလုံး....
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 6, 2010 at 6:44 PM
ဟင်းအမည်တွေက ဖတ်တာနဲ့တင် သွားရေကျချင်လာတယ်..
Anonymous July 10, 2010 at 5:07 AM